Falanqaynta Suuq geynta Saadaasha leh ThinkVine | Martech Zone
Falanqaynta Suuq geynta Saadaasha leh ThinkVine
Isniin, November 2, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Muxuu noqonayaa Soo Noqoshada Maalgashiga haddii aad beddeli lahayd isku darka suuqgeyntaada?
Tani waa su'aal ay macaamiisha waaweyn ee istiraatiijiyadaha suuq geynta adag (ee isku dheelitiran ee u dhexeeya dhexdhexaadiyeyaal badan) isweydiiyaan maalin kasta. Miyaynu idaacadda ku dayn karnaa khadka tooska ah? Miyaan ka beddelaa suuqgeynta telefishanka oo aan raadiyaa? Saamaynta ganacsigaygu muxuu noqon doonaa haddii aan bilaabay suuqgeynta qadka tooska ah?
Caadi ahaan, jawaabtu waxay ku timaadaa tiro badan oo tijaabooyin ah iyo doollar suuq geyn ah oo lumay. Ilaa hadda. Suuqleyda ayaa adeegsanayay waxqabadkii hore si ay u saadaaliyaan waxqabadka suuqgeynta mustaqbalka. Waxaa jira qatar aad u weyn oo laxiriirta tan maadama cusub lagu daro waqtiga. Wareejinta noocyada kala duwan ee wargeysyada iyo khadka tooska ah waa hal tusaale oo yar. Hadaad kusii waday qarashyadaada kaladuwan adigoon ka wareejin khadka tooska ah, ma gaareysid kartida ugu badan. Xaqiiqdii, waxaad si fudud u lumin kartaa lacagtaada.
ThinkVine wuxuu ka shaqeynayay "Ka waran haddii" dhacdooyin ku dhowaad toban sano. Macaamiishoodu waa kuwo qurux badan impressive Sunny Delight, SC Johnson, LegalZoom, Del Monte, Hershey, iyo Citrix Online.
ThinkVine waxay awood u leedahay inay tan ku sameyso iyada oo loo marayo nidaam ku-saleysan wakiil ku-saleysan wakiil oo dhab ahaan la soo saaray 1940-kii. Adoo fahmaya qeybaha suuqa ee kaa soo iibsaday adoo adeegsanaya warbaahin kasta isla markaana ku dabaqaya qaabka qeybaha kale ee dhexdhexaadinta ah, ThinkVine wuxuu awood u leeyahay inuu dhiso qaab saadaalin ah oo ku saabsan sida suuqgeyntu uga shaqeyn doonto dhexdhexaadiyaashan kale. Waa nidaam.
Xaaladaha uu hormariyo ThinkVine waxaa lagu dabaqi karaa waqti dheer, muddo gaaban suuq-ku-saleyn munaasab ku saleysan, iyo dadaallada suuq-geynta qeybta ku saleysan. ThinkVine xitaa wey saadaalin kartaa xaalada ugu dambeysa… ka waran hadaad gebi ahaanba joojiso suuq geynta!
Waxbadan ka baro adoo booqanaya shey safar ah Jilitaanka Suuqgeynta iyo Barnaamijka Qorsheynta ee 'ThinkVine'.
Siidayn buuxda: Maamulaha guud Damon Ragusa iyo aniga waxaan la shaqeynay Bruce Taylor Salaan sannado badan ka hor si aad u dalbato habab la mid ah ku-toosinta suuqgeynta boostada. Damon waxay ka dhistay moodellada tirakoobka firfircoon ee ka imanaya astaamaha macaamiisha iyo, iyadoo la adeegsanayo otomaatigga Bruce, waxaan ula shaqeyn karnaa ku shaqeynta moodelladaas si loo helo xog ururinno. Codsiga waxaa loo yaqaan 'Prospector' wuxuuna u shaqeeyay si cajiib ah. Bruce wuxuu sifiican u hagaajiyay codsiga sanadihii la soo dhaafay walina wuxuu u adeegsadaa tiro ka mid ah macaamiisha waaweyn ee suuq geynta tooska ah.
Tags: saadaalinfalanqaynta saadaalintasuuq geynta saadaalintafekerka
Nov 3, 2009 at 3: 28 AM
Doug, taariikhda wax iibsiga noocee ah ayey ThinkVine u baahan tahay inay tan sameyso? Miyay tan ugu samayn karaan shirkad cusub / shirkad bilow ah?
Nov 3, 2009 saacadu markay tahay 3:57 PM
Xaqiiqdii waxay u baahan tahay xog taariikhi ah. Waxaan u maleynayaa haddii ay haysteen macaamiil ku filan, isu geynta qaababku inay suurtagal noqon karto. Shaki in macaamiishoodu ay qadarin doonaan taas, in kastoo! Waxaan u maleynayaa inay adeegsadaan ugu yaraan xogta sanadka 1 - Waxaan u maleynayaa in 2 lagu taliyay.